(AKHRISO) Garoonka Adan Cadde oo Shaqadiisii hakad gashay markii la helay…. |
(AKHRISO) Garoonka Adan Cadde oo Shaqadiisii hakad gashay markii la helay….
Sida ay sheegeen ciidamo katirsan kuwa Dawlada waxaa la helay Xog ku saabsan qaraxyo Al shabaab ay ka fulin lahaayeen Magaalada Muqdisho gaar ahaan xarumaha ugu muhiimsan ee dawlada iyo AMISOM leeyihiin.
waxaana laga dareemayaa garoonka diyaaradaha Adan Cadde hakad ku jira cabsidaasi awgeed.
Booliska Amisom iyo kuwa Dawlada Somaliya ayaa heegan la geliyey taasi oo lagu macneeyey in Shabaab ay sameyn rabaan weeraro la mid ah kuwii lagu qaaday Xarunta UNDP-da iyo Maxkamada gobolka Banaadir.
Xogta Warqaad ay heshay waxay xiganeysaa Saraakiil Booliska Dawlada katirsan oo si hoose inoogu xaqiijiyey in la helay weeraro ay shabaab soo qaadayaan maalmo gudahood laakiin ciidamada amaanka ayaa la howlgeliyey.
Al shabaab oo laga cabsi qabay in Jimcihii shalay ay soo qaadaan weeraro loogu magac daray Ramadaan 17 maadaama uu dhacay dagaalkii Badar ayaana dhicin laakiin xogta la helay ayaa ah in qorshaha ay ugu jirto weeraro xoogan.
Wixi soo kordha akhristayaasheena dib kala socda insha allah